Iyo Wall Printer: Iyo Vertical Printing Solution Kune Yemukati kana Ekunze Masvingo | Martech Zone
China, June 3, 2021 China, June 3, 2021 Douglas Karr
Ndine shamwari yangu inogadzira uye inopenda madziro emadziro uye anoita basa rinoshamisa. Nepo hunyanzvi ihwo hunoshamisa hwekudyara hunogona kushandura nzvimbo yekushandira kana nzvimbo yekutengesa, kugona kugadzira nekupenda yakajeka graphic pane yakatwasuka nzvimbo yaive yakanyanya kusiyiwa kuti isarudze kuiswa kana kushandurwa kwemunyori. Nyowani yekudhinda tekinoroji yakabuda inozo shandura izvi, hazvo… yakamira madziro maprinta.
Iyo Wall Printer
Iyo Wall Printer yazvino yekumira yekudhinda tekinoroji inobvumidza iyo yemagetsi kupenda kwemahombe edhijitari graphic mafaera emifananidzo, mifananidzo, mifananidzo, kana mameseji mameseji kune chero chero chemukati kana chekunze pamusoro. Mishini yavo yakagadzirirwa kupurinda pane dzakawanda nzvimbo dzinosanganisira plaster, jira, girazi, simbi, zvidhina, kongiri, vinyl, uye huni.
Mumakore asingasviki makore maviri, Iyo Wall Printer yakatotengesa michina yayo kumabhizimusi anodarika makumi mana muNorth neSouth America, neUK. Vertical maprinta anopa asingaverengeke ekugadzira, anoshanda, uye mafaro mashandisiro ayo anoshandura kuita chaiwo mabhizinesi mikana emakambani uye vezvemabhizinesi anozvitora.
Tarisa uone kuti vamwe vatengi vari kushandisa kana kuronga kushandisa michina:
Mumwe mushambadzi wekuFlorida, MiArte muNaples FL, mushure mekudhinda mifananidzo yavo yekutanga 5'x 8 'uye kutumira mapikicha kuFacebook anoti, "Takashamiswa nemhinduro iyi. zvinoita sekunge vanhu vanga vakamirira mukana uyu. ” Mumwe mutengi akapindura uye akapa kondirakiti iyi yeWall Printer kudhinda maviri 'maseru akaenzana pamadziro, iyo yakabva yaiswa mudenga, ichigadzira tapestry -style mural.
Dhipatimendi repamusoro reD1 University yemitambo iri kutsvaga kutenga TWP Machine yekushandisa pazviratidzwa pabhora, basketball, uye dzimwe nzvimbo dzemitambo nezvinoitika, uye pamadziro ezvivakwa zvemitambo, pamberi pemitambo mikuru yepamba.
Vagadziri vemukati vakatenga michina kuti vabatsire nekubatanidza kuratidzwa kweavatengi zvavo zvekuzvivaraidza kana zvidziro zvemasvingo munzvimbo dzekugara nekutengesa nzvimbo nenzvimbo dzekushandira.
Iyo Wall Printer Nyaya
Sa serial muzvinabhizimusi Paul Baron aitsvaga chinotevera chinhu chikuru, akasangana nepfungwa nyowani: yekumira kudhinda. Yakanga iri pfungwa nyowani kuAmerica asi ichizivikanwa kwemakore muAsia, India, Middle East, uye Europe. Pfungwa yekupenda mukati nekunze murali zvisingadhuri kune maartist uye varidzi vezvivakwa zvakamufadza. Kudhinda pamadziro echinhu chero chepamusoro, zvakavimbika uye nenzira kwayo, chakamufadza.
Mushure mekutarisisa kune vashoma vagadziri vanopa iyi hunyanzvi hwehunyanzvi, mu2019 Paul akapedzisa chibvumirano neyekutanga uye anotungamira kugadzira muAsia. Akavasarudza, akadaro, nekuti kukosha uye poindi yemutengo zvakasanganiswa zvakanaka nehunhu hwekugadzira uye gungano, uye rutsigiro kuti vakwanise kuyera kuzadzikisa zvido zvemisika yeNorth & South America.
Kubva ipapo kambani yatengesa zvekuparadzira mumisika inodarika makumi maviri uye ikabatsira kumisikidza mabhizimusi matsva kumatunhu ekumaodzanyemba kweUS neCanada, South America, UK, nePuerto Rico. Ivo varikukoka vatengi vatsva kuti vadzidze nezve Wall Kudhinda uye inomanikidza bhizinesi mukana unomiririra.
Iyo Wall Printer ichave ichiwedzera muNorth nekuSouth America, UK, uye The Caribbean nekukurumidza pamusoro pemakore mashoma anotevera. Sezvo mabhizinesi ekudhinda pamadziro anokura, kambani ichavatsigira nemhinduro dzinooneka, inki, zvikamu, basa rakatanhamara, uye kushambadzira kuti vawedzere masevhisi avo ekubudirira eWall Printing munharaunda.
Ipo iyo tekinoroji iri kumashure kwekudhinda yakamira yakashandiswa pasirese kwemamwe makore ikozvino yave kuwanikwa kumabhizinesi muNorth nekuSouth America kwese.
Paul Baron, CEO weWall Printing USA
Pfungwa nyowani dzinoramba dzichibuda kubva kuWall Printers avo vatengi vachikumbira hunyanzvi hwemadhijitari pamadziro emhando dzese, zviri mukati nekunze.
Dzidza Zvakawanda Nezve Iyo Wall Printer
Tags: mural kudhindamuralspurinda remadziroyekumusoro kudhindamurusvingopurinda remadziro